Macluumaadka Shirkadda - Shandong Gaoji Warshadaha Makiinado Co., Ltd.
Waxaa la aasaasay 1996, Shandong Gaoji Industry Machinery Co., Ltd. wuxuu ku takhasusay R&D ee tiknoolajiyada xakamaynta warshadaha iswada, sidoo kale naqshadeeyaha iyo soo saaraha mashiinada otomaatiga ah, hada waxaan nahay soo saaraha ugu weyn iyo salka cilmi baarista ugu weyn ee mashiinka mashiinka mashiinka CNC ee Shiinaha. .
Shirkadeenu waxay leedahay awood farsamo oo xoog leh, khibrad soo saarid hodan ah, xakameyn hanaan horumarsan, iyo nidaamka xakamaynta tayada oo dhameystiran. Waxaan hogaamineynaa warshadaha gudaha si loo cadeeyo ISO9001: 2000 nidaamka maaraynta tayada. Shirkaddu waxay ka kooban tahay aag ka badan 28000 m2, oo ay ku jiraan aagga dhismaha oo ka badan 18000 m2. Waxay haysataa in ka badan 120 nooc oo ah qalabka wax lagu farsameeyo ee CNC iyo qalabka ogaanshaha saxda ah ee sare ee ku lug leh xarunta makiinadda CNC, mashiinka wax lagu shiido ee baaxadda weyn leh, mashiinka foorarsiga ah ee CNC, iwm., Iyadoo laga dhigayo wax soo saar ka kooban 800 nooc oo mashiinno taxane ah oo taxane ah sanadkiiba.
Hadda shirkaddu waxay leedahay in ka badan 200 oo shaqaale ah oo ay ka mid yihiin in ka badan 15% farsamayaqaannada injineernimada, xirfadlayaal ku lug leh farsamooyin kala duwan sida sayniska maaddada, injineernimada farsamada, xakamaynta hannaanka kombuyuutarka, korantada, dhaqaalaha, maareynta macluumaadka iyo wixii la mid ah. Shirkadda ayaa si isdaba-joog ah loo sharfay sida "Hi-Tech Enterprise ee Gobolka Shandong", "Hi-Tech Product of Jinan City", "Product Madaxbanaan Hal-abuurka ah ee Jinan City", "Jinan City ee Ilbaxnimo iyo Aamin aamin ah", iyo taxane kale cinwaanada.
shirkadeenu waxay leedahay awood xoogan qaabaynta wax soo saarka iyo horumarka, lahaanshaha teknoolojiyad badan oo patent ah iyo tikniyoolajiyad asaasi ah oo lahaansho leh. Waxay ku hogaamineysaa warshadaha iyada oo la wareegaysa in ka badan 65% saamiga suuqa ee suuqa wax lagu iibiyo ee busbar, iyo mashiinnada dhoofinta tobanaan dal iyo gobol.
Mabda 'Suuqa u janjeedha, Talo-xididaysan, Cusbooneysiin ku saleysan, Adeeg-koowaad,
waxaan si kal iyo laab ah kuu siin doonaa alaab tayo sare leh iyo adeeg heer-koowaad ah!